Tababaraha Manchester City, Pep Guardiola ayaa meesha ka saaray in kooxdiisu ay wax saxeexyo ah samaynayso bisha Janaury inkasta oo ay dhibaato kusoo dhex jirtay siddeeddii kulan ee illaa hadda ay ciyaartay.
City ayaa ku jirta kaalinta 14aad ee miiska kala sarraynta horyaalka Premier League, waxaanay guuleysatay saddex kulan oo kaliya siddeed ciyaarood oo ay dheeshay, iyadoo Tottenham ay markii ugu dambaysay si xun u garaacday, taas oo ay uga horreysay Liecester City oo ku tumatay, halka ay barbarro la galeen Liverpool, West Ham iyo Leeds United.
Guardiola ayay dadka qaarkood saadaalinayeen inuu suuqa iibka geli doono si uu xal ugu helo boosaska ay hadda dhibaatadu ka jirto, laakiin tababaraha reer Spain ayaa shaaciyey in haba-yaraatee aanay qorshahooda ku jirin inay ciyaartooyo cusub lasoo saxeexdaan.
Isaga oo la hadlayay website-ka kooxdiisa Manchester City, waxa Guardiola la weydiiyey haddii uu saxeexyo samayn doono bisha January, waxaanu ku jawaabay: “Maya, wax saxeex ah ma samayn doono. Waxaan haystaa koox heersare ah oo dhamaan koobabka ku tartamaysa.”
Tababarahan hore ee Barcelona ayaa waxa uu ku dooday in kooxdiisu ay tahay mid meel walba ka dheellitiran oo isku filan, taas darteedna aanay suuqa waxba uga baahnayn.
“Wiilashani si fiican ayay u ciyaaraan, waanay sii wadi doonaan inay ciyaaraan.” Ayuu yidhi.
Manchester City ayaa maanta oo Sabti ah waxay garoonka Etihad Stadium kusoo dhoweyn doontaa Burnley, waxaanay dagaal u geli doonaan sidii ay guul usoo hoyn lahaayeen.
Salaasada ayay kulan kale leeyihiin oo ay waajihi doontaa FC Porto ciyaar ka tirsan Champions League, laakiin maadaama ay mar hore soo gudubtay oo ay diyaarsatay booskeeda wareegga 16-ka, tababare Guardiola ayaa ciyaartoygiisa muhiimka ah nasisan doona.
Ahmedou Ould Abdallah: Mauritania’s independence, “affirmation of our id”